हाम्रोखबर सोमबार, जेष्ठ १९ २०७७
काठमाडौं । डा.सुशिला मल्ल लायन्स क्लब अन्तराष्ट्रिय ३२५ ए टु को डिस्ट्रिक गभर्नर पदमा चयन भएकी छन । अघिल्लो हप्ता भएको इ भोटिङमा डा. मल्लसँगै फस्ट डिस्ट्रिक गभर्नरमा केशव पाण्डे र सेकेण्ड डिस्ट्रिक गभर्नरमा दिनेश श्रेष्ठले पनि एस भोट प्राप्त गरी उक्त पदमा चयन भएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष लायन्समा कन्भेन्सनको आयोजना नगरि इ भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ३५७ जना मतदाता सहभागि भएका थिए ।
मत परिणाम अनुसार डा. मल्लले एक मात्र नो भोट पाएकी थिइन् भने ३५६ एस भोट प्राप्त गरेकी थिइन् । त्यस्तै पाण्डेले १७ नो भोट र ३४० एस भोट तथा श्रेष्ठले २ नो भोट र ३५५ एस भोट पाएका थिए । नयाँ नेतृत्वले आगामी जुलाइदेखि कार्यभार सम्हाल्ने छ । उनीहरुको कार्यकाल आगामी सन् २०२१ को जुनसम्म रहने छ ।
यसअघि नै डा.मल्लले आफ्नो कार्यकालमा क्लबहरुलाई थप शसक्क्त र क्रियाशिल बनाउने उद्घोष गरिसकेकी छन ।